कसरी सूची प्राप्त गर्ने. backu को लागि edu साइटहरु?
उच्च प्राधिकरण वेबसाइटहरू लिङ्कहरू प्राप्त गर्दै उनीहरूलाई प्राप्त गर्न एकै चीज हो. edu साइटहरु खोज इन्जिन को रूप मा यिनी साइटहरुलाई सम्मानित को रूप मा आकर्षित, प्रयोगकर्ताहरु को लागि मूल्यवान र उच्च प्राधिकृत. अधिकतर अवस्थामा, यो सूची बनाउन कठिन छ. यदि तपाइँ सानो हुनुहुन्छ वा हालैको स्थापित डोमेन हो भने ब्याकलिङ्कका लागि एडु साइटहरू. यसबाहेक, यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन व्यापारको विकास गर्दै हुनुहुन्छ भने, शिक्षा वा सरकारी उद्योगमा होइन, प्रदान गर्न समस्या पर्ने हुनेछ. edy साइट पाठकहरूसँग सामग्रीहरू जुन तिनीहरूका लागि रोचक हुन सक्छन्.
जब तपाईं लिङ्क निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई तपाइँको डोमेन प्राधिकरण र डोमेन मूल्याङ्कनमा तपाइँको ध्यान तिर्न आवश्यक छ. यी दुई वेबसाइट गुणस्तर मूल्याङ्कन मेट्रिक्स समान छन् र निर्धारण गर्नका लागि सेवा गर्ने एक विशिष्ट साइटबाट महत्त्वपूर्ण एक लिङ्क कसरी हुनेछ. तपाईंको लिङ्क उच्च अधिकारमा राखेर. edu, वेबसाइटहरु तपाईंलाई धेरै लाभ दिन्छन्. सबैभन्दा पहिले, तपाईं सजिलै संग आफ्नो सामग्री को माध्यम ले रिक्ति गर्न सक्नुहुन्छ. edu वेबसाइटहरू, र प्रायः सम्भवतः यसले अपेक्षाकृत छोटो अवधि भित्र उच्च श्रेणी प्राप्त गर्नेछ. यसबाहेक, तपाईं यी बाह्य लिङ्कहरू मार्फत बहुमूल्य लिङ्कको रस प्राप्त गर्नुहुनेछ.
यो लेख लिङ्क निर्माण प्रविधिको लागि समर्पित छ जुन सूचीको निर्माण गर्न सेवा गर्दछ. एडु साइटहरू ब्याकलिङ्कहरूको लागि. म तपाईंलाई कसरी सिर्जित गर्न र कसरी आफ्नो डोमेन अधिकार उच्च प्राप्त गर्न सिकाउनेछु.
उच्च पीआरबाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नुहोस्. edu वेबसाइटहरु
यदि तपाईं अधिक सान्दर्भिक इनबाउंड लिङ्कहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई पहिले नै आफ्नो वेबसाइटमा सुधार गर्न आवश्यक छ (सही कोड त्रुटिहरू, राम्रो अन्तरलिङ्गी प्रणाली स्थापित गर्नुहोस्, मेटाडाटा अनुकूलन गर्नुहोस् र मूल्यवान सामग्री सिर्जना गर्न).
लिङ्क निर्माण अवसरोंका लागि सबैभन्दा बहुमूल्य र वांछनीय वेब स्रोतमा विकिपीडिया,. gov र. edu domains. यी साइटहरूले Google सँग विभिन्न प्रकारको वजन लिन्छन्. यी वेब स्रोतहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै मूल्यहरू छन् र उनीहरूको पृष्ठहरूमा राखिएको कुनै पनि लिंकलिङ्क पनि भरोसा गर्न सकिन्छ.
आउनुहोस् हामी प्राप्त गर्ने तरिकालाई थप विस्तृत छलफल गरौं. edu र. gov backlink:
एक नियम को रूप मा. edu र. जीभका वेबसाइटहरूमा ब्लगहरू छन् जुन पोस्ट विविध अनुसन्धान आधारित र शैक्षिक सामग्री. तपाइँ यो लिङ्क निर्माण अवसर बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ. यसैले यदि तपाईं आफ्नो लिंक बिल्डिंग रणनीति को पालन गर्न सक्छन् र अन्त मा अन्त मा शुरू गर्न सक्छन्, केहि सामाग्री जो तपाईं निर्माण गर्न चाहते हो. gov or. edu साइटहरू यसलाई हेर्दै. यो लिङ्क निर्माण प्रविधि कार्यान्वयन गर्दै, तपाइँ आफ्नो सामग्री भित्र प्रासंगिक इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
विभिन्न शैक्षणिक संस्थाहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न उचित छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि, कम से कम कुनै पनि तरिका, तपाईंको उद्योगको सम्बन्धमा छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्नुहोस्
. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं चिकित्सा उपकरण खुदरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई छूट, दिशानिर्देश वा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने चिकित्सा विश्वविद्यालयहरूसँग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।. यसले तपाईंलाई आफ्नो स्थानमा फिर्ता दिन र उच्च पीआरबाट प्रासंगिक लिंक रस प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. edu वेब स्रोतहरू. यसबाहेक, तपाईं विद्यार्थीहरूसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ, तपाइँ सामग्रीको रूपमा बदल्न सक्नुहुनेछ. र यदि तपाईं एक राम्रो लेखक पाउँनुहुन्छ भने, तपाईले नियमित रूपमा आफ्नो कम्पनीको लागि सामग्री लेखकको रूपमा भाडा लिन सक्नुहुन्छ Source .